Kunhlanga zimuka nomoya ngemizamo yokubhula umlilo eDemocratic Republic of Congo - Bayede News
Ukungahleleli kahle, ukuntuleka kwezinhloso kanye nokuntuleka kwezimali kuphazamise isifungo sikaMengameli uFelix Tshisekedi (osesithombeni) sokuqeda ukuchitheka kwegazi empumalanga yeDemocratic Republic of Congo, ngokombiko oyimfihlo wePhalamende obonwe ngabezindaba ngoLwesihlanu.
NgoNhlaba uHulumeni washintsha iziphathimandla zombuso ezifundazweni zaseNyakatho yaseKivu nase-Ituri wafaka amaphoyisa namasosha emzamweni wokuthuthukisa amashumi eminyaka ezindabeni zokuphepha esifundeni esicebe ngezimbiwa. Kusukela ngoNhlaba izakhamizi zibulawe ngezinga elifanayo nangaphambili, zifinyelele ngaphezu kwe-1 000 kuleli sonto, ngokusho kombiko ohlanganiswe yiKivu Security Tracker, ebbheka udlame esifundeni.
Lo mbiko uhlanganiswe yiKhomishana Yezokuvikela Nokuphepha yeSishayamthetho sikaZwelonke. Lo mbiko uthole ukubulawa, ukudlwengula, nokugetshengwa sekushubile ezindaweni ezithintekile selokhu kwasungulwa umthetho wezempi ezifundazweni ezimbili ngoNhlaba. Abakhulumela uHulumeni namasosha abatholakalanga ukuthi baphawule.
Ngokusekelwe ezingxoxweni nongqongqoshe abaphezulu abahlanu, okuhlanganisa nezokuvikela kanye nezezimali, umbiko uthe isicelo samasosha sezigidi ezingama- $596 ukuze kuqaliswe isimo sokuvinjezelwa, okungaphezu kokuphindwe kabili kwesabelomali salo sonyaka, sahlangatshezwa yimali yokuqala eyizigidi ezingama-$33. Ingaphezu kwengxenye imali eyasetshenziswa ekomkhulu lamasosha eKinshasa, kwathi amanye ama-12% asetshenziswa ezikweletini zamaholo.
“Ukumenyezelwa kwesimo sokuvinjezelwa akusekelwe wuhlelo lokuhlela. Kwenziwe ngaphandle kwephakethe lezezimali elikhulu nelihlangene, ngaphandle kokuchaza izinhloso zezempi, futhi ngaphandle kwezikhathi zezinyathelo zesu,” kusho lo mbiko.
Ezinye izinkinga ezibalulwe yilo mbiko kubalwa ukungabibikho kwezinsiza kanye nezokuthutha, amasosha ayizipoki, isimo esikhathazayo samalungelo abantu, inkohlakalo, izivimbamgwaqo ezingekho emthethweni ezifuna “izintela zesifunda sokuvinjezelwa”, nokuntuleka kokubambisana nemiphakathi yendawo.Umbiko, owethulwe ngoMandulo zingama- 29, uthe angama-273 amasosha abulewe kwalimala ali-111 kusukela ngoNhlaba, okudalule okokuqala ngqa izigameko zokubulawa kwabantu embuthweni. Udlame lusalokhu lukhona emngceleni weCongo ne-Uganda, iRwanda kanye neBurundi kusukela ekupheleni okusemthethweni kwempi yombango ngowezi-2003, kodwa izindaba zokuphepha ziye zaqina eminyakeni emibili edlule.